चिनियाँ बालिका — अनलाइन डेटिङ वेबसाइट — साँचो प्रेम पाउन
के-के हुन सक्छन् बारे भने चिनियाँ बालिका ।. त्यहाँ छन्, अधिक चिनियाँ बालिका भन्दा कुनै पनि नस्ल वा संस्कृति. चीन एक डेमोग्राफिक छ सो विशाल छ । एक पटक चिनियाँ जीवित विदेश वा रूपमा नियम विगतमा प्राप्त एक बच्चा परिवार प्रति नीति को संख्या मा चिनियाँ मान्छे संसारको विस्तार हुनेछ. हामी हुनेछ संग बायाँ एक बिल्ली को एक वृद्धि मा एक चिनियाँ बालिका । तर अधिक छ कि अर्को पुस्ता र पछि हाम्रो समय छ । अब लागि, लाख एकल चिनियाँ बालिका भन्दा गर्न तयार. जब म लेख्न चिनियाँ बालिका लागि ब्राइड्स, म मतलब वयस्क सामान्य वर्षीया चिनियाँ बालिका सजनी । बालिका जस्तै छ शब्द ‘मान्छे’ वा जस्तै ‘प्रेमिका’ वा ‘प्रेमी’ हो । यो सिर्फ एक शब्द वर्णन गर्न महिला । चिनियाँ बालिका बनाउन मेरो राय मा, धेरै राम्रो सजनी । म हुँ एक अमेरिकी जीवित युरोप र मात्र सीमित अनुभव संग चिनियाँ बालिका रूपमा मित्र, तर के तिनीहरूले सुनाउने मलाई तिनीहरूले परम्परागत र चाहनुहुन्छ र एक परिवार हेरविचार गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो परिवार । तिनीहरूले आक्रामक छैनन् वा मांग, को साधारण पाठ्यक्रम, यो छैन आफ्नो संस्कृति । त्यसैले, एक मान्छे को लागि चाहन्छ जो एक मायालु परिवार र एक शान्तिपूर्ण घर चिनियाँ केटी राम्रो हो सजनी । यो चिनियाँ बालिका छैनन् धार्मिक. क्याथोलिक, तिनीहरूले हुन सक्छ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, आफ्नो दुलहीको तर, आफ्नो हृदय, तिनीहरूले छैनन् धार्मिक.
त्यसैले, यदि यो मामला मा सबै तपाईं को विचार छैन, एक चिनियाँ केटी को लागि एक दुलहीको रूपमा तपाईं सक्छ मा समस्या को भविष्य छ । गान्धी भन्नुभयो,»तपाईं छन् आफ्नो धर्म छ ।»यो साँचो हो । आफैलाई सोध्नुहोस् के यो कथन तपाईं मतलब. के चिनियाँ महिला घोटाला तपाईं डेटिङ साइटहरूमा? जस्तै अमेरिकी महिला वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो संसारमा असल र खराब छन्, तर विचार भ्रम र प्रभाव मा चिनियाँ संस्कृति भन्नुहुन्छ म अधिकांश मानिसहरू राम्रो नैतिक छ । केही चिनियाँ भाषा वाक्यांश उपयोगी हुन सक्छ छन्, प्रयोग गर्न एक च्याट मा, पनि केही प्रभावित हुनेछ: यी लोकप्रिय चिनियाँ भाषा (सरलीकृत चिनियाँ भाषा) को पोर्टल हो । तिनीहरूले छैनन् चिनियाँ डेटिङ साइटहरु. तपाईं प्रयोग गर्न आवश्यक अनुवाद उपकरण डाउनलोड गर्न कसरी पत्ता लगाउन र साइन अप लागि आफ्नो च्याट र डेटिङ भाग हो । तर जब तपाईं के छन् लाखौं सामान्य चिनियाँ बालिका हुनेछ कि तपाईं संग च्याट.
त्यसैले, यो प्रयास लायक छ
तपाईं च्याट गर्न सक्नुहुन्छ संग चिनियाँ बालिका मुक्त लागि. म बुझ्दैनन् चिनियाँ संस्कृति छ, तर म हेरिरहेका छन् चिनियाँ सिक्न भिडियो, एक सानो चिनियाँ र यो बुझ्न अधिक. चिनियाँ दुलहीको हुँ किनभने म विवाह । वास्तवमा, म पनि छैन हेर्न चिनियाँ बालिका जब म भिडियो हेर्न चाहन्छु, म चिनियाँ सिक्न छ । तर तपाईं चाहनुहुन्छ भने हेर्न चिनियाँ बालिका’ भिडियो सिक्ने लागि तिनीहरूलाई बारेमा, म सिफारिस केही कुराहरू छन् । तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं के भने, विवाह वा लाइव चीन मा कम से कम रोकटोक शहर पाठ्यक्रम छ, हङकङ । यो साँच्चै एक ठाउँमा बाँच्न सक्छ र काम र बिना अंग्रेजी बोल्न धेरै समस्या छ । मलाई थाहा छ एक भन्दा बढी अमेरिकी-चिनियाँ दम्पतीले जो जीवित वा विचार हङकङ-हङकङ विकल्प । वास्तविक प्राप्त भने, तपाईं फेला पार्न सकिँदैन केटी चीन मा तपाईं, म तपाईंलाई मदत गर्न सक्दैन. हेर्न कच्चा जनसंख्या को संख्या मा सबै भन्दा ठूलो चिनियाँ शहर मा, त्यहाँ छ, एक उपयुक्त साथी यो बीचमा जनसंख्या छ । संख्या अर्थ मा केहि डेटिङ. पछि तपाईं चिन्न जनसंख्या केन्द्र भन्दा तपाईं पाउन आवश्यक पहुँच गर्न यी एकल । म चाहन्छु पूरा प्रेमिका चीन देखि तपाईंलाई थाहा छ भने म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छ चिनियाँ बालिका मोबाइल नम्बर, मलाई थाहा दिनु, म हेर्न हुनेछ साइटहरु मा तपाईं सिफारिस माथि ।
← मुक्त विज्ञापन बिना चीन दर्ता । सबै भन्दा राम्रो वर्गीकृत वेबसाइट द्वारा देशहरू र शहर